#१ कति खाने र कति पटक खाने ?
″तपाईंले दिनैभरी खाइरहनु हुँदैन । यदि तपाईं तीस बर्षभन्दा कम उमेरको हुनुहुन्छ भने, दिनमा तीन पटक भोजन गर्नु पर्याप्त हुन्छ । यदि तपाईंको उमेर तीस वर्षभन्दा बढी छ भने, दिनमा दुई छाक खाना खानु उत्तम हुन्छ । हाम्रो शरीर र दिमागले तबमात्रै सर्वश्रेष्ठ तरिकाले काम गर्छन्, जब पेट खाली हुन्छ । यदि तपाईं सचेत भएर खानुभयो भने, खाना खाएको साढे दुई घण्टामै खाना तपाईंको आमाशय वा पेटबाट बाहिर निस्किनेछ, अनि बाह्रदेखि अठार घण्टामै तपाईंको शारीरिक प्रणालीबाट बाहिर निस्किनेछ । यदि तपाईं यो सरल कुराप्रति सचेत रहनुभयो भने, तपाईंले आफूभित्र अझ बढी ऊर्जा, स्फूर्ति र सतर्कता महसुस गर्नुहुनेछ ।″ - सद्‌गुरु
#२ खाना राम्रोसँग चपाउनुहोस्
योगमा भनिन्छ कि ″तपाईंले एक गाँसलाई २४ पटक चपाउनुपर्छ ।″ यसको पछाडि थुप्रै वैज्ञानिक आधारहरू छन् । मुख्यतः तपाईंले खानुभएको खाना मुखमै लगभग पच्न सुरु हुन्छ, जसले गर्दा तपाईंको शरीरमा अल्छीपन र सुस्तता आउन दिँदैन । अर्को कुरा के हो भने, यदि तपाईंले २४ पटक चपाउनुभयो भने, त्यो भोजनको सूचना तपाईंको शरीरमा स्थापित हुन्छ अनि तपाईंको शरीरको प्रत्येक कोषिकाले तपाईंको लागि के ठीक हो र के बेठीक भन्ने कुरा तय गर्न सक्दछ— स्वादको आधारमा होइन, तपाईंको पूरै प्रणालीलाई के उपयुक्त छ भन्ने सन्दर्भमा । यदि तपाईंले यो अभ्यास गर्न थाल्नुभयो भने, केही समयपछि शरीरले के रुचाउँछ र के रुचाउँदैन भन्ने बारेमा शरीरको प्रत्येक कोषिकामा राम्रो ज्ञान हुनेछ । - सद्‌गुरु
#३ समय अनुसारको सही भोजन
“यस संस्कृतिमा कुन समयमा कुन वनस्पतिहरू उपलब्ध छन् अनि शरीरको लागि के उचित छ भन्ने कुरामा आधारित रही गर्मीयाममा एक तरिकाले खाना बनाइन्थ्यो, वर्षायाममा अर्कै तरिकाले अनि जाडोयाममा भिन्दै किसिमले खाना बनाउने गरिन्थ्यो । यो समझदारीलाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्नु राम्रो हुन्छ, साथै शरीरको आवश्यकता र बदलिँदो मौसम अनुसार खाना खानु उचित हुन्छ ।
उदाहरणको लागी जाडोयाममा गहुँ, गहत, तील जस्ता खाद्य पदार्थ खान सकिन्छ, जसले शरीरमा गर्मी बढाउँछ । जाडोयाममा, चिसो मौसमको कारण छाला फाट्ने समस्या हुन्छ । पहिले मानिसहरूले क्रिम वा लोसनको प्रयोग गर्दैनथे । उनीहरू दैनिक रूपमा तिलको प्रयोग गर्दथे; तिलले शरीरमा गर्मी बढाउँछ अनि छालालाई नरम राख्छ । यदि शरीरमा पर्याप्त मात्रामा उष्ण वा गर्मी भयो भने, छाला फाट्ने समस्या हुँदैन । त्यसैगरी, गर्मीयाममा शरीरमा धेरै गर्मी हुनाले शरीरलाई चिसो बनाउने खानेकुराहरू खाइन्थ्यो ।” – सद्‌गुरु
#४ सन्तुलित आहार
“आज चिकित्सकहरू यो भनिरहेका छन् कि थुप्रै मानिसहरूमा मधुमेहको (डायबिटिज) समस्या रहेको छ । यसको एउटा प्रमुख कारण हाम्रो आहार हो, किनकि हामीहरूको आहारमा प्रायः एउटै अनाज हुने गर्छ । मानिसहरू कि त चामल मात्रै खान्छन् वा गहुँ मात्रै खाइरहेका हुन्छन् । यसले निश्चय नै स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न गर्छ । आफ्नो भोजनमा फरक-फरक अनाजहरू प्रयोग गर्नु अपरिहार्य छ ।
पहिले-पहिले मानिसहरू सधैँ धेरै मात्रामा चना, दाल, फलफूल र अरू गेडागुडीहरू खाने गर्दथे । तर, बिस्तारै-बिस्तारै यो चलन हराउँदै गएको छ, अनि अहिले हाम्रो थालमा हेर्ने हो भने, धेरै भात र थोरै तरकारी हुन्छ । यो एउटा गम्भीर समस्या हो । पछिल्लो २५ देखि ३० वर्षमा मानिसहरूले आफ्नो आहारमा अत्यधिक कार्बोहाईड्रेट समावेश गर्न थालेका छन्, जसलाई परिवर्तन गर्न एकदमै जरूरी छ । किनकि, अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट उपभोग गर्नाले स्वास्थ्यमा नरामो असर गर्छ । मानिसहरूले यो आधारभूत कुरालाई बुझ्न एकदमै जरूरी छ । तपाईंले खाने खानामा अरू चीजहरू बढी हुनुपर्छ, भात होइन । तपाईंलाई कति भोक लागेको छ, त्यसकै आधारमा भात खाने वा नखाने भनेर रोज्न सक्नुहुन्छ ।” – सद्‌गुरु
#५ दुई भोजनको बीचमा अन्तराल हुनुपर्छ
#६ भोजनको सन्दर्भमा बानी नबसाल्नुहोस्
#७ खाना खानुअघि केहीबेर पर्खिनुहोस्
गौतम बुद्धले यस हदसम्म भनेका थिए कि "जब तपाई निकै भोकाउनु भएको हुन्छ अनि तपाईंलाई खानाको एकदमै आवश्यकता हुन्छ, त्यसबेला यदि तपाईंले आफ्नो खाना अरू कसैलाई दिनुभयो भने तपाईं अझ बलियो बन्नुहुनेछ ।" म त्यस हदसम्म त जाँदिनँ । म यति भनिरहेको छु "केवल दुई मिनेट पर्खिनुहोस्"— यसले निश्चय नै तपाईलाई शक्ति दिनेछ । तपाईंमा जे-जति कुराप्रति बाध्यात्मक प्रवृत्ति रहेको हुन्छ, तपाईं यो तरिका अपनाउन सक्नुहुन्छ— केवल दुई मिनेट पर्खिनुहोस्; यसले तपाईंलाई मार्दैन, यसले तपाईंलाई निकै शक्ति दिनेछ !
कृपया यो कुरामा ध्यान दिनुहोस् कि खानपिनका यी सामान्य तरिकाहरू अधिकांश मानिसहरूमा लागू हुन्छ । तर, निश्चय नै प्रत्यके व्यक्तिको शरीरको संरचना फरक हुन्छ अनि कुनै निश्चित रोग लागेको व्यक्तिले आफ्नो आहार वा भोजनमा फेरबदल गर्नु अगाडि चिकित्सकसँग सल्लाह लिनुपर्दछ ।
नछुटाउनु होला !
भोजन शरीर Health